Igbo, John: Lesson 100 - Ekpere maka otuto nke Nna (Jọn 17:1-5) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 100 (Introduction to the intercessory prayer; Prayer for the Father's glory)
1. Okwu mmalite ekpere ekpere
Jizos jere mmad ozi site n'ozioma na oluya; na-agwọ ndị ngwụrọ, na-enye ndị agụụ na-agụ nri, na-emeghe anya ndị ìsì, na na akpọlite ndị nwụrụ anwụ. Ịhụnanya ya bụ mkpughe nke ebube. Chineke n'etiti ịkpọasị na ọnwụ.
Ná mmalite nke ozi ya, ìgwè mmadụ gbakọrọ ya. Mgbe ụka ndị Juu nke okpukpe (nke ndị isi na ndị ihu abụọ) hụrụ na ntọala nke okpukpe ha na iwu ha nọ na-ama jijiji, ha tụrụ egwu Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya na igbochi na ọnwụ. Mmiri ịnụ ọkụ n'obi nke ìgwè mmadụ ahụ dara, ha hapụrụ ya. Ná mmalite nke ozi ya, ìgwè mmadụ gbakọrọ ya. Mgbe ụka ndị N'ebe ahụ, a kpagburu Kraịst na ụfọdụ n'ime ụmụazụ ya na-eguzosi ike n'ihe, ma ọ nọgidere na-ahụ onye ọ bụla n'anya.
Na njedebe, mgbasa ozi nke Kansụl weere na otu n'ime mmadụ iri na abụọ ahụ; ọ kwadebere ịrara Nna ya ukwu nye, ebe Jizọs nọ na-akwadebe onwe ya n'oge nri nke ọgbụgba ndụ maka ọrụ ha dịka ndịozi. N'amabata ya, ọ gwara ha ka ya na Nna ya dị n'otu, na otu Mmụọ Nkasi Obi ga-esi guzobe ha na mmekọrịta nke ịhụnanya Chineke, n'agbanyeghị mkpagbu a na-abịanụ.
Ma ndị na-eso ụzọ aghọtaghị nzube Onyenwe ha, n'ihi na a wụpụbeghị Mmụọ Nsọ n'ime mkpụrụ obi ha. Ya mere Jisos gara n'iru Nna ya, ma tinye onwe ya na ndi naeso ya nye n'aka Nna n'ekpere nke ndi nchu aja. O kwukwara banyere ndị ga-ekwere na ya site na àmà ndịozi ahụ.
Ekpere ekpere nke Kraịst, nke e dekọrọ na Isi nke 17, na-enye anyị nghọta pụrụ iche banyere ụzọ Ọkpara Chineke si soro Nna ya kparịta ụka, na ụdị ịhụnanya n'etiti Ndị nke Atọ n'Ime Otu. Mmụọ nke Ekpere bụ onye a ma ama ebe a. Onye obula nke ghotara ya n'onu nke a, abata n'ulo Chineke ebe ebe ndi ofufe na ndi ngbachite anya juru.
2. Ekpere maka otuto nke Nna (Jọn 17:1-5)
1 Mb͕e Jisus kwusiri okwu ndia, O we welie anya-Ya abua n'elu elu-igwe, si, Nnam, oge hour abiawo. Na-enye Ọkpara gị otuto, ka Ọkpara gị wee too gị;
Kraist mara ndi neso uzo ya na ya na Nna ya no. Ọ nọ n'ime Nna na Nna nọ n'ime ya. Onye hụrụ ya ahụwo Nna ahụ. Ma ndị na-eso ụzọ apụghị ịghọta ihe ngosi a dị egwu. Uche ha na-etu ọnụ ka ha na-anwa ịghọta njedebe nke Chineke na anụ ahụ. Jisos nyere ndi neso ike ya na ndi nenwegh uche aka nlekota Nna ya, ichota ha ma debe ha na nmekorita nke Chineke na idi nso.
Site n'ịdọli anya ya n'eluigwe, o nwere ike ịbụ na Jizọs juru ndị na-eso ụzọ ya anya. Kedu ka o si ekpegara Nna ya nke bi n'eluigwe ekpere ma kwuo n'otu oge ahụ na ọ dị n'ime Nna ahụ na Nna ahụ nọ n'ime ya?
Omume ndị a na-enweghị nghọta mere ka uche ha daa mbà. Anyị maara na echiche abụọ ahụ dị irè: Njikọ zuru okè dị n'etiti Nna na Ọkpara, yana ọchịchị nke Onye ọ bụla. Chineke dị ike karịa uche anyị na Mmụọ Nsọ na-akụziri anyị ka anyị na-emeso echiche abụọ ahụ dị ka ihe dị irè. Rịọ Chineke ka ọ kọwaa gị ma ọ bụrụ na ịmara a siri ike. N'ihi na ọ dịghị onye nwere ike ịghọta Nna ahụ na Ọkpara ya, ma ọ bụghị site na Mmụọ Nsọ.
N'ekpere a, Jizọs kpọrọ Chineke, Nna. N'ihi na Chineke abụghị Onye Nsọ dị nsọ na Onyeikpe siri ike, mana ebere ebere ya na-ekpuchi àgwà ya niile. Chineke n'onwe ya bu ima di ebere na ezi obi ebere. Ihe ohuru a nke Chineke dika nna huru n'anya bilitere mgbe amuru Jisos site na Mo Nso, Okpara Chineke. Ya na Chineke biri ruo mgbe ebighebi, ma buru anu aru iji gbaputa anyi dika umuaka nye Onye Nsọ. Ngosipụta a nke aha bụ Nna, maka Chineke, bụ isi ihe dị mkpa nke ozi Jizọs gosipụtara n'ụwa. Site na eziokwu a sitere n'ike mmụọ nsọ, Jizọs wepụtara anyị site n'egwu ikpe, ebe Onyeikpe ahụ bụ Nna anyị, onye na-akwụ ụgwọ bụ Nwanna anyị nke kwụrụ ụgwọ anyị ji. Ọ bụrụ na ị na-emetụta aha Nna na ọtụtụ n'ime nkwupụta Jizọs n'ime mkpụrụ obi gị ma bie ndụ dịka ihe ọmụma ahụ si dị, ị ghọtara Oziọma ahụ.
Kraist kwetara n'ihu Nna ya na oge kachasị mkpa nke ụwa, oge nke imekorita n'etiti Chineke na Mmadụ. Ụmụ mmadụ, ndị mmụọ ozi, okpukpe na nkà ihe ọmụma ejiriwo amaghị awa echere awa ndị a. Ọ bịara. Kraist ebuliwo ikpe nke uwa dika Nwa-aturu Chineke. Ọ dị njikere ịnwụ naanị ya n'ọkụ nke iwe Chineke. N'oge ndị a dị oke mkpa, onye na-arara ya nye na-abịa n'okporo ụzọ na ụlọ ọrụ nke ndị uweojii ụlọ nsọ iji jide Nwa Chineke, Onye dị umeala n'obi ma dị ike nke dị njikere ịnwụ n'enweghị nchebe.
2 dika I nyere Ya ike n'aru anu-aru nile, Ọ gēnye ndi nile I nyeworo ndu ebighi-ebi.
Ọtụtụ ndị na-eche na "otuto" pụtara ntụgharị uche na ìhè. Jizọs kwupụtara na ịhụnanya ịchụ àjà bụ ihe kachasị mkpa nke otuto na isi nke ọdịdị Chineke ya. Ọ gwara Nna ya ka o debe ya n'ịhụnanya ahụ, n'ime ọtụtụ awa n'obe, na oké ihe mgbu na egwu, ka ìhè nke ịhụnanya Chineke wee bụrụ nke zuru oke n'obe a kpọgidere n'obe. Ọkpara ah di njikere inye onwe ya àjà n'ihi ndi nnupuisi na ndi omekome, ka ha wee buru ndi eziomume site n'onw ya. Nke a bụ isi nke otuto Ọkpara.
Obughi kwa ichota ikwu na ya adighi anwu n'ihi onwe ya, kama n'ihi ebube nke Nna, na ya onwe ya neme ihe dika onye obula puru ime. O nyere nna ya otuto n'elu obe ma mezuo mmekorita nke mmadu na Chineke. Mgbe a gbaghaara mmehie, a gosipụtara ịhụnanya Chineke, a na-akpọkwa mmadụ nile ka ha kwenye. A na-awụkwasị Mmụọ Nsọ n'elu ndị kwere ekwe n'ime Kraịst, ka ụmụaka wee nye Nna ha otuto site n'ụzọ zuru okè na-eje ije n'ịdị ọcha. Enweghi ike igosi ihe di ebube kari aha Nna ya karia kari ibu nna nye otutu umu. Ya mere, Jizọs rịọrọ ka e mechaa ịhụnanya zuru ezu site na ọmụmụ nke mmụọ nke eziokwu n'ekpere aha Nna ahụ.
Ọkpara ahu weghachiri ihe Chineke kwuru nke Nna nyere ya, ya bu ikike nile n'aru ndi nile amuru site na ndinyom. Kraist bu ezi Chineke, Onye okike na onye ngbaputa. Ọ bụ Onyenwe anyị, Eze na Onyeikpe. Anyị bụ ya na ọ bụ ezi olileanya anyị. O natara ikike a, mana, ọ bụghị maka ikpe na mbibi, kama iji zọpụta ma duzie. Nzube nke nbia nke Kraist b na ndi kwere ekwe nime ya gaenweta nd ebighiebi. Ọnwụ adịghịzi achịkwa ha.
N'elu obe, Jizos gbaghaara mmehie ụmụ mmadụ; ọ bụ ezie na mmadụ ole na ole nabatara onyinye a nke nzọpụta. Ndi kwere ekwe bu ndi a hoputara ndi kwere na Nna, Okpara na Mo Nso, ma na-aga n'ihu n'ebube nzoputa Kraist. Mmụọ nke Mmụọ Nsọ na-adị n'ime ha. Ndụ ọhụrụ ha bụ ọrụ ebube nke oge anyị, na-eto aha Nna m.
3 Nka bu ndu ebighi-ebi, ka ha mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, Onye I zitere, Jizos Kraist
Mmụọ Nsọ na-akwado ihe Jizọs kwuru gbasara Chineke. Ọ bụ Nna Kraịst na nke anyị. Onye obula nke mara ihe omimi a nke Chineke ma kwere na ya nwere ndu ebighebi. Enweghi igodo ozo maka imata Chineke ma obugh na Onye nke Jisos Kraist. Onye na - ahụ Ọkpara na Nna nke Nna, ma tụkwasị ya obi, a ga - agbanwe ya dị ka nwa nsọ. Ezi omuma nke okwu Kraist abugh ihe omuma, kama ndu ime mmuo na uto. Chineke weghachite onyinyo Ya nime onye kwere ekwe. Kedu ihe ihe oyiyi Chineke a pụtara? Ọ bụ ịhụnanya, eziokwu na iguzosi ike n'ezi ihe nke Mmụọ Nsọ na-eweta n'ime ụmụ Chineke. Obu kwa otuto nke Nna site n'onod nke Ya naegosiputa.
Chineke zitere Kraist n'ime ụwa ka ndị mmadụ wee ghọta na ọ bụghị ya, onye a mụrụ site na Mmụọ Nsọ, kpogidere ma kpọlite ya, ha enweghị ike ịma Chineke. Ọkpara ahụ bụ Onyeozi Chineke nke chịkọtara ikike niile dị n'ime mmadụ na ịhụnanya na ịdị nsọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara ezi Chineke ahụ, nyochaa ndụ Jizọs bụ onye a kpọrọ Chineke. Dị ka Mesaịa bụ Eze nke ndị eze na Nnukwu Onye Nchụàjà, onye amụma zuru oke na okwu Chineke ama oduk.
4 Emewo m ka ị dị ebube n'ụwa. Emezuru m ọrụ ị nyere m ka m mee. 5 Ma ub͕u a, Nna, were Onwe-gi nyem otuto, nke M'nwere n'ebe I nọ mb͕e uwa akādighi.
N'oge ọ nọ n'ụwa, Jizọs na-atụgharị uche mgbe nile banyere Nna ahụ, gbaara Ya àmà ma rụọ ọrụ Ya. Ọ gọrọ onwe ya inye Nna ya otuto. Ihe o nuru site n'aka Nna ya ka o nyere anyi. Ndụ ya niile toro Nna ahụ, ebe ọ maara na a ga-aza ekpere ya. O mezuru ọrụ mgbapụta n'elu obe nke Nna ya nyere ya ka o mezuo. O kwetara na Nna ahụ emechara ihe niile. Ebe ọ bụ na Jizọs mere onwe ya ihe efu, ma ọ bụghị otuto maka onwe ya, o kwesịrị ka ebube nke mgbe ebighi ebi gbasaa ya. Ntre enye ama owụt ke imọ idi ubo i oto ke nsinsi, Abasi ke Abasi, ubo i emi odude ke unana, emi ekekebotde edibotke. Mgbe o mechara mezuo nzube ya, ọ chọsiri ike ịlaghachikwuru Nna ya. Dika O rigo elu igwe, ndi mo-ozi na ndi ozo mekwara ya otuto, si, "Di nma bu Nwa aturu ahu nke egbuworo, iji nweta ike, akam, amamihe, ike, nsopako, otuto na ngọzi".
EKPERE: Nna m n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ. Ọkpara gị enyewo gị otuto site n'ije ije, ekpere na ịchụ àjà. Anyị ekwesịghị ka anyị lekwasị gị anya. Anyị na-ekele gị maka ịgbaghara njehie anyị n'ihi na Kraịst anwụọla maka anyị; I meela ka anyị bụrụ ụmụ gị. Ana m ekele gị maka ịkwaga m na ndụ ebighi ebi site na mwụpụ nke Mmụọ Nsọ n'ime obi m. Nyere anyi aka inye gi otuto mgbe niile ma ghara ichota otuto nye onwe ayi, ma rube isi n'iwu nke Okpara gi na ihita onwe gi n'anya, ka ndi ozo wee hu oru oma gi na nna gi ma nye gi otuto site n'enye gi aka.
Gịnị bụ echiche bụ isi na akụkụ mbụ nke ekpere Jizọs?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:40 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)